China zinc ion antibacterial mumiriri fekitori uye vagadziri Langyi
zinc ion antibacterial mumiririri
AntibacMax Zinc ion antibacterial agent - yakachengeteka Zinc ion antibacterial chigadzirwa chine akasiyana masizi, ane girazi uye zirconium phosphate sevatakuri, uye Zinc ions seyakachengeteka uye ine simba rinoshanda rinorwisa mabhakitiriya.
Zinc ion chinhu chakakosha chiripo mumuviri wemunhu, icho chakachengeteka uye chisingakuvadzi. Nekupindira uye nekuparadza mapuroteni mumabhakitiriya, Zinc ion ine yakafara-spectrum inorwisa mabhakitiriya maitiro, uye ine yakanaka yekudzivirira mhedzisiro pane akasiyana fungi ane protein capsid.
Kudzivirirwa (zvakakosha mumuviri wemunhu), hutano, hapana kukurudzira
■ Excellent Anti-chakuvhuvhu waivako, uye ane mugumisiro deodorization
■ Kwakanaka kupisa kupisa uye kugadzikana kwemakemikari
■ Kugona kwemuchina wakanaka
Kugadziriswa kwakanaka kwekurwisa kushanduka uye yunifomu yakapararira muzvinhu zve polymer;
■ Kwakanaka bactericidal maitiro
Iva neakanakisa bactericidal maitiro pane Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, pneumococcus, pseudomonas aeruginosa zvichingodaro.
Zinc inorwisa mabhakitiriya mumiriri zvigadzirwa parameter
Mhando dzese dzezvigadzirwa zvepurasitiki
Fiber, firimu, pendi
AntibacMax Zinc ion inorwisa mabhakitiriya mumiriri inogona kushandiswa mumapurasitiki, rabha, machira, elastomers, mahwendefa, mapaipi, ceramics uye dzimwe nzvimbo dzinoda kwenguva refu antibacterial maitiro.
Pashure: Mhangura ion antibacterial mumiriri
Zvadaro: HyMax Anti-hydrolysis masterbatch
Antibacterial yakanyunguduka jira rekusasa
Antibacterial yakanyungudika-yakaridzwa masterbatch
Antibacterial Nonwoven Cloth, Antibacterial Yarn, Antibacterial Masterbatch, Antibacterial Electret Masterbatch, Antibacterial Melt-Yakavhuvhuta Masterbatch, Polymeric Antihydrolysis Mumiriri,